स्वास्थ्य - साप्ताहिक
डा. सुमनराज ताम्राकार, असार २६, २०७६
स्त्रीरोगको बहिरङ विभागमा आउने बिरामीहरूमा महिनावारीको गडबडीपछि दोस्रो ठूलो समस्या आङ खस्ने नै हुन्छ । पाठेघर स्थिर अङ्ग होइन, यो केही मात्रामा चलायमान हुन्छ । पाठेघरलाई यथास्थानमा राख्न विभिन्न प्रकारका बाक्ला तन्तु (लिगामेन्ट) ले टेवा दिएका हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा.बालकृष्ण शाह, असार १८, २०७६
किशोरावस्थामा हुने यो समस्यालाई हाइपोमेनोरेजिया भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिनावारी दुई दिनभन्दा कम हुने तथा थोरै रगत जाने हुन्छ । यस्तो हुनुको कारण गम्भीर नभएर धेरैजसो अवस्थामा मानसिक तनाव, चिन्ता आदि भएको पाइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा.बालकृष्ण शाह, असार १३, २०७६
बच्चा पाइसकेपछि वा नपाउँदै पनि कसै–कसैमा महिना नपुग्दै वा महिनामा दुई–तीन पटक पनि एक–दुई दिन थोरै–थोरै रगत देखा पर्न सक्छ । समान्यतः यो हार्मोनल असन्तुलनका कारण हुन्छ । धेरै महिलामा यो बिस्तारै आफैं निको भएर जान्छ । धेरै रगत खेर गएको अवस्थामा भने उपचार गराउनुपर्ने हुन सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
रक्तदान जीवनदान– नाराका साथ विझिन्न संघसंस्थाले रक्तदान कार्यत्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । मानिसको शरीरमा रगत बन्ने फ्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ र रत्तदान गर्दा कुनै हानि हुँदैन । रक्तदान ठूलो कल्याणकारी काम हो, जसलाई जहिले पनि गर्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. सुमनराज ताम्राकार, जेष्ठ २९, २०७६
कतिपयले मुख गन्हाउने समस्याबाट पीडित भै नमीठो अनुभव सँगालेको हुनुपर्छ । तपाईंले कुराकानी गर्दा नजिकै बसेको साथीले मुख खुम्च्याउन सक्छ । यो समस्याको नराम्रो पक्ष के हो भने आफूलाई आफ्नो मुख गन्हाइरहेको जानकारी नहुनसक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
हामीले एउटा अर्को सन्तानको चाहना गरेका छौं । हामीले करिब ३ महिनादेखि अस्थायी साधनबिना यौनसम्पर्क गर्दा पनि गर्भ बसेको छैन । के कारणले गर्भ नबसेको होला ? हामीले अब के गर्नुपर्ला अनि के–कस्ता जाँच गराउनुपर्ला ? पुरा पढ्नुहोस्
डा. सुमनराज ताम्राकार, फाल्गुन २९, २०७५
विश्वभर करिब २० करोड महिला जीर्ण खालका मृगौलाको समस्याबाट पीडित छन् भने बर्सेनि ६ लाखको हाराहारीमा मृत्यु भैरहेको छ र मिर्गौलासम्बन्धी समस्या नै महिला मृत्युको आठौं कारक तत्व बनिरहेको छ । नेपालमा करीब २७ लाख नेपालीमा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएको, त्यसमध्ये २७ हजारमा अति गम्भीर खालको समस्या भएको तथा बर्सेनि २ हजार ७ सय जनाको मिर्गौलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छाड्ने अनुमान छ । पुरा पढ्नुहोस्
 पेटको बलमा सुत्ने ।  दुवै हातले गोडाको नली हाड समाउने ।  श्वास भर्दै गोडा र हात तन्काउने । पुरा पढ्नुहोस्